ကျွန်​တော် ​သိ​သော Hosting ​ဆိုက်​များ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ကျွန်​တော် ​သိ​သော Hosting ​ဆိုက်​များ
File Hosting Site: Max. Upload Size Additional Comments (on free accounts)
Box.net 10 MB 10 MB? - good for one song, we guess.
megarotic.com 500 MB Inactive files deleted after 21 days - use the ‘video’ feature to view submissions.
SaveFiles.net 90 MB Neat feature - browse the latest uploads.
SendThisFile none? Requires registration. Apparently no limit on file sizes - works via email notification.
Ye Naing Aung February 17, 2010 at 11:41 AM
​လို​ချင်​တာ​တွေ ​လွယ်​လွယ်​ကူ​ကူ​ရ​ယူ​နိုင်​အောင် ​လုပ်​ပေး​ထား​တဲ့​အ​တွက် ​အ​စ​စ​အ​ရာ​ရာ ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​လို့ ​လည်း ​ကျွန်​တော်​ဆု​တောင်း​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်​ခင်​ဗျား...
nwaeoolu February 17, 2010 at 10:24 PM
​မိုး​သွေး​ငယ် February 24, 2010 at 3:10 AM
​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ရေ.. singmirror.com ​လည်း ​မ​ဆို​ဘူး​ခင်​ဗျာ။ ​မ​သိ​သေး​တဲ့ ​ဟာ​တွေ ​ထပ်​သိ​ရ​လို့ ​ကျေး​ဇူး​ပါ​ဗျာ။​အ​ဆင်​ပြေ​အေး​ချမ်း​ပါ​စေ။
Myo Win Yee February 24, 2010 at 8:31 AM
Windows7ultimate RTM version ​လေ​ရှိ​ရင် ​မျှေ​စ​ချင်​ပါ​တယ်....beta version ​က expire ​ဖြစ်​တော့​မှာ ​မို့​လို့​ပါ....​ကျေး​ဇူး...
maypaji March 3, 2010 at 10:50 AM
​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​ဘယ်​တွေ ​ရောက်​နေ​တာ​လဲ။ ​ပို့စ်​အ​သစ်​မ​တင်​တာ ​ကြာ​ပြီ​နော်။ ​ထိုင်း​နိုင်​ငံ​မှာ ​ဖြစ်​တဲ့​ပြ​သ​နာ​ထဲ​များ ​ပါ​နေ​လို့​လား။ ​အစ်​ကို​ညီ​နေ​မင်း​အ​စ​စ ​အ​ရာ​ရာ ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​စေ​လို့ ​လေး​လေး​နက်​နက် ​ဆု​တောင်း​ပေး​ပါ​တယ်။ ​သူ​ငယ်​ချင်း​တို့​အား​လုံး​လည်း ​အိုင်​တီ ​နည်း​ပ​ညာ​များ ​သင်​ကြား​ပေး​နေ​တဲ့ ​အစ်​ကို​ညီ​နေ​မင်း​အ​တွက် ​ဝိုင်း​ဝန်း​ဆု​တောင်း​ပေး​ကြ​ပါ​ဦး​နော်။
htoo myat tun January 23, 2012 at 2:54 PM